Galmudug oo go'aanno kasoo saartay Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo go’aanno kasoo saartay Dhuusamareeb
Shir looga hadlayay amniga oo ka dhacay xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray go'aanno la xiriira sidii loo adkeyn lahaa amniga caasimadda.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sharaxaad ka bixiyay go’aanada kasoo baxay shirkii amniga looga hadlayay, waxa uuna sheegay in aan la aqbali doonin in hub sharci darro ah lagu dhex qaato gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in maalin walba degaannada Galmudug ay ka dhacaan colaad beeledyo, waxaana uu ciidamada Amniga ku amray inay tallabo ka qaadaan dadka hubka sharci darrada ah qaata ee ku sugan Galmudug.
Wasiirka ayaa kulankan ku shaacisey in aan sidoo kale la aqbali doonin soo galinta waxyaabaha maanka dooriya ee guddaha degaanada Galmudug iyo in guriyaha laga kireeyo dad aan ogolaansho ka heysan laamaha amniga, isla markaana aan la marin hubinta hey’addaha qaabilsan howlahaasi.
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa qorsheyneysa sidii ay wax uga baddali lahayd xaaladda amni xumo ee bilihii u dambeeyay laga dareemayay xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb.